सिन्धुपाल्चोकः किन दोहोरिन्छ प्राकृतिक विपत्ति ? « Deshko News
सिन्धुपाल्चोकः किन दोहोरिन्छ प्राकृतिक विपत्ति ?
विसं २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी प्राकिृतक विपत्ति र दुर्घटनाले झन ठूलो पीडा थपिदिएको छ । प्रकृतिले दिएको विपत्तिले यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले नपुगेर अझै यहाँ सडक तथा हवाई दुर्घटनासमेत थपिने गरेकाले पछिल्ला केही वर्षमा विपत्ति नै सिन्धुपाल्चोकको नियति बन्न पुगेको छ ।
भोटेकोशी नदी नै थुनिने गरी आएको कहालीलाग्दो पहिरोको प्राकृतिक दुर्घटनामा परी धेरैको घरबास नै गुम्यो र बेसहरा बने । अझै पनि धेरै घाइतेको उपचार र राहत नपाउँदाको गुनासो सकिएको छैन । पहिराले कतिको घरजग्गा गुम्दा गाउँबाटै विस्थापित हुनुप¥यो । जुरेको यो ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले धेरैलाई बिर्सनै नसक्ने छाप छोडेर गयो